musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Urgent Omicron Nhau: Johnson & Johnson vanogona kugadzira Pfizer neModerna Kunyanya Kushanda
Health News • nhau
Iyo Johnson & Johnson COVID-19 Booster, Inotungamirwa Mwedzi Mitanhatu Mushure Maviri-Dose Regimen yeBNT162b2, Inoratidza Kuwedzera Kwakakura muAntibody uye T-cell Mhinduro.
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (Kambani) nhasi vazivisa mhedzisiro yekutanga kubva muongororo yakazvimirira, kusanganisira chikamu chidiki chevatori vechikamu kubva kuJanssen-sponsored COV2008 study, yakaitwa naDan Barouch, MD, Ph.D., et al. yeBeth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), iyo yakaratidza kuti booster pfuti yeJohnson & Johnson COVID-19 vaccine (Ad26.COV2.S), yakapihwa mwedzi mitanhatu mushure medosi maviri ekutanga regimen yeBNT162b2, yakawedzera masoja ekudzivirira. uye T-cell mhinduro. Mhedzisiro iyi inoratidza mabhenefiti angangoita heterologous boosting (mix-and-match). Chinyorwa chinotsanangura zvabuda izvi chaiswa pairi medRxiv.
"Pane humbowo hwekutanga hunoratidza kuti kusanganisa-uye-mechi yekusimudzira nzira inogona kupa vanhu mhinduro dzakasiyana dzekudzivirira neCCIDID-19 pane nzira yekusimudzira," akadaro Dan Barouch, MD, Ph.D., Director weCentre for. Virology uye Vaccine Research kuBIDMC. “Muchidzidzo chekutanga ichi, pakapihwa vanhu mwedzi mitanhatu mushure mechirongwa chekudzivirira cheBNT26b2, pakave nekuwedzera kwakafanana kwemhinduro dzemasoja ekudzivirira chirwere pasvondo rechina zvichitevera kukwidziridzwa uye kuwedzera kukuru kwechirwere ichi. CD162+ T-cell mhinduro neAd2.COV8.S zvichienzaniswa neBNT26b2.
"Idzi mhedzisiro dzinopa ruzivo rwakakosha rwesainzi rwejekiseni redu kana richishandiswa semusanganiswa-uye-mutambo wekusimudzira uye rinogona kubatsira kuzivisa nzira dzekusimudzira nechinangwa chekupedza denda," akadaro Mathai Mammen, MD, Ph.D., Global Head, Janssen. Research & Development, Johnson & Johnson. "Idzi data rinowedzera kuhuwandu huri kukura hwehumbowo hunoratidza kuti musanganiswa-uye-mechi booster dosi yekudzivirira yeJohnson & Johnson COVID-19 inobudirira kuwedzera mhinduro dzinosetsa uye mhinduro dzemaserura zvichipesana neiyo yekutanga dhizaini yeSARS-CoV-2, pamwe chete. mhando dzeBeta neDelta."
hese Phase 2 data inosimbiswa nemhedzisiro yekutanga kubva kuUK COV-BOOST yekiriniki yekudzidza yakaburitswa mu. The Lancet, izvo zvakaratidza kuti kutevera kubayiwa kwekutanga nemadosi maviri eBNT162b2 (n=106) kana ChAdOx1 nCov-19 (n=108), dosi inosimudzira yejekiseni yeJohnson & Johnson COVID-19 yakawedzera mhinduro dzese dzekudzivirira nerweseri uye T-cell.
Serura (T-Cell) Mhinduro
n iyi chidzidzo chekutanga, kuwedzera neiyo Johnson & Johnson COVID-19 vaccine mushure mekutanga vaccine regimen yeBNT162b2 inoita seinotungamira mukuwedzera kukuru kweCD8+ T-cell mhinduro pane kuwedzera neBNT162b2. Iyi T-cell mhinduro data inoratidza mutsauko pakati pemhinduro dzekudzivirira muviri zvichitevera kuwedzera homologous neBNT162b2, uye musanganiswa-uye-mutambo kukurudzira neJohnson & Johnson COVID-19 yekudzivirira ichitevera chirongwa chekutanga cheBNT162b2.
Iyo Johnson & Johnson COVID-19 yekudzivirira inosimudzira Janssen's AdVac® tekinoroji uye masero-mediated immune, kusanganisira CD4+ uye CD8+ mhinduro. T-masero anogona kunanga nekuparadza maseru akatapukirwa nehutachiona hunokonzera COVID-19. Kunyanya, maCD8+ T-cell anogona kuparadza zvakananga maseru ane utachiona uye anobatsirwa neCD4+ T-cells.
Humoral (Antibody) Mhinduro
Ose ari maviri ejekiseni yeJohnson & Johnson COVID-19 uye BNT162b2 semaboosters akatungamira kune akafanana kusarereka uye kusunga antibody mazinga achipokana neyekutanga SARS-CoV-2 dhizaini, pamwe neDelta neBeta akasiyana, mavhiki mana achitevera kuwedzera. Nekudaro, mushure memusanganiswa-uye-mechi booster dosi yekudzivirira yeJohnson & Johnson COVID-19, masoja ekudzivirira chirwere akaramba achiwedzera kweanokwana mavhiki mana asi muvanhu vakagamuchira homologous yekuwedzera neBNT162b2 yekudzivirira, masoja ekudzivirira chirwere akadzikira kubva svondo repiri kusvika vhiki. ina post-boost.
Neutralizing masoja ekudzivirira chirwere anokwanisa kusunga kuhutachiona nenzira inovharira hutachiona uye inovharira hutachiona kune yepamusoro kufema turakiti. Kusunga masoja ekudzivirira chirwere anogona kusunga kuhutachiona 'spike protein uye kumisa hutachiona kuburikidza nekusaita neutralizing antiviral functionalities.
Pachidzidzo ichi, imwe sampuli yebiorepository kuBeth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) yakawana sampuli kubva kuvanhu vakagamuchira BNT162b2 yekudzivirira. Vatori vechikamu vakaenderera mberi nekutevera mubiorepository uye vakakwidziridzwa ne30 ug BNT162b2 (n=24) kana vakanyoreswa muCOV2008 kudzidza (NCT04999111) uye vakakwidziridzwa ne5, 2.5, kana 1 × 1010 vp yekudzivirira kweJohnson & Johnson COVID-19 (n=41). Chidzidzo cheCOV2008 ndecheJohnson & Johnson inotsigirwa, inoenderera, yakapofumadzwa Phase 2 yekiriniki yekuedza (VAC31518COV2008) kuti iongorore mushonga wayo weCCIDID-19 sekusimudzira muvakuru vane makore gumi nemasere zvichikwira.
Sangano reUS Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Advisory Committee on Immunisation Practices (ACIP) yakurudzira vaccine yeJohnson & Johnson COVID-19 senzira yekusimudzira vanhu vese vanokodzera vane makore 18 zvichikwira vanowana mvumo yeCOVID-19.
Johnson & Johnson vanoenderera mberi nekuendesa data rakakodzera kune vamwe vatongi, World Health Organisation (WHO) neNational Immunisation Technical Advisory Groups (NITAGs) pasi rese kuti vazivise kuita sarudzo pamatanho ekutonga vaccine, sezvinodiwa.
Mukubatana nemapoka ezvidzidzo muSouth Africa nepasirese, Kambani yanga ichiongorora kushanda kwemushonga wayo weCCIDID-19 mumhando dzakasiyana-siyana, zvino kusanganisira itsva uye iri kupararira nekukurumidza. Omicron musiyano. Pamusoro pezvo, Kambani iri kutsvaga mushonga weOmicron-specific variant uye inoufambisa sezvinodiwa.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve nzira yeKambani ine-multi-pronged yekubatsira kurwisa denda, shanya: www.jnj.com/covid-19.
The Johnson & Johnson COVID-19 vaccine, inonziwo Janssen COVID-19 Vaccine, inotenderwa kushandiswa pasi peEmergency Use Authorization (EUA) yekudzivirira inoshanda kudzivirira Chirwere cheCoronavirus 2019 (COVID-19) chinokonzerwa nekufema kwakanyanya. chirwere chekoronavirus 2 (SARS-CoV-2).
Yekutanga vaccine regimen yeJanssen COVID-19 Vaccine idosi rimwe chete (0.5 mL) rinopihwa kune vanhu vane makore gumi nemasere ekuberekwa zvichikwira.
Imwe Janssen COVID-19 Vaccine booster dose (0.5 mL) inogona kupihwa ingangoita mwedzi miviri mushure mekudzivirira kwekutanga kune vanhu vane makore gumi nemasere zvichikwira.
Mushonga umwechete wekuwedzera weJanssen COVID-19 Vaccine (0.5 mL) unogona kupihwa kune vanhu vane makore gumi nemasere ekuberekwa zvichikwira seheterologous booster dose zvichitevera kupedzwa kwekudzivirira kwekutanga neimwe yakatenderwa kana yakabvumidzwa yekudzivirira yeCOVID-18. Nguva yedosing yeheterologous booster dose yakangofanana neyakatenderwa kuwedzera dosi rejekiseni rinoshandiswa kubayisa kwekutanga.
taurira mupi wejekiseni nezvese zvehutano hwako, kusanganisira kana iwe:
vane chero kurwara
une chirwere chekubuda ropa kana uri muropa rakatetepa
vane immunocompromised kana vari pamushonga unokanganisa immune system yako
vane pamuviri kana kuronga kubata pamuviri
vagamuchira mumwe mushonga weCOVID-19
ndakambofenda ndakabatana nejekiseni
vakave neakanyanya kukanganiswa nemushonga mushure medosi yapfuura yemushonga uyu
aive nekusawirirana kwakanyanya kune chero chinhu chemushonga uyu.
Yekutanga Vaccine: Iyo Janssen COVID-19 Vaccine inopihwa sedoro rimwe chete.
Imwe imwe booster dosi yeJanssen COVID-19 Vaccine inogona kupihwa ingangoita mwedzi miviri mushure mekudzivirira kwekutanga neJanssen COVID-19 Vaccine.
Mushonga umwechete webooster weJanssen COVID-19 Vaccine unogona kupihwa kune vanhu vane makore gumi nemasere zvichikwira vakapedza kubayiwa kwekutanga neimwe yakabvumidzwa kana kubvumidzwa yekudzivirira yeCOVID-18. Ndokumbira utarise nemutarisiri wako wehutano nezve nguva yeiyo booster dose.
Injection site reactions: kurwadziwa, kutsvuka kweganda, uye kuzvimba.
General side effects: musoro, kunzwa kuneta zvakanyanya, tsandanyama kurwadza, kuda kurutsa, fivha.
Kuzvimba lymph node.
Kunzwa kusina kujairika muganda (zvakadai se kurira kana kukambaira) (paresthesia), kuderera kwekunzwa kana kunzwa, kunyanya muganda (hypoesthesia).
Kurira kunoramba kuchirira munzeve (tinnitus).
Kuzvimba kumeso nehuro
Rash rakaipa muviri wako wese
Dzungu uye kupera simba
Kuramba kurwadza kwemudumbu,
Musoro wakakomba kana unoramba uripo kana kusaona zvakanaka,
Kupwanya kuri nyore kana maronda madiki eropa pasi peganda kupfuura nzvimbo yejekiseni.
Kushaya simba kana kurira kwekunzwa, kunyanya mumakumbo kana maoko, izvo zviri kuwedzera uye zvichipararira kune dzimwe nhengo dzemuviri.
Kunetseka nekufamba kwechiso, kusanganisira kutaura, kutsenga, kana kumedza.
Kuona kaviri kana kusagona kufambisa maziso.
Kuomerwa nekudzora dundira kana kushanda kwe bowel.
Thomas Lash anoti:
Ichi chigadzirwa chokwadi chine yambiro yakawanda uye yakashata maitiro. Inenge yakachengetedzeka saAlex Baldwin mufirimu seti. Ndinoshuva kuti dai vaizomisa mishonga iyi uye kuwana chaiyo, yakachengeteka, inoshanda yebhayoloji inobata hutachiona kana chero hutachiona sezvo ini ndichizondiitira zvimwe zveizvi bio zvombo.